jeudi, 14 mars 2019 09:49
Sambava: Nipoahan’ny varatra ny fitaovan’ny JIRAMA
Varatra iray nahery vaika no nipoaka teto Sambava ny alatsinainy tokony tamin’ny valo ora alina nandritra ny orana mikija. Tapaka niaraka tamin'izany ny herinaratry ny JIRAMA manerana an’i Sambava.
Ny ampitson'io ihany ny Jirama dia nanambara fa efa eo ampanarenana ny “transfo” simban’ny varatra io hamerenana ny jiro eto an-drenivohitry ny faritra SAVA.
jeudi, 14 mars 2019 09:46
Fifidianana depiote: 855 ny antotan-taratasy firotsahan-kofidiana voarain’ny OVEC nanerana ny Nosy
Kandida natolotry ny antoko ny 340, ary mahaleotena na tsy miankina ny 515 tamin’ireo. Raha ny tatitra vonjimaika nataon’i Rakotonarivo Thierry, filoha lefitry ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na CENI.
Antoko sy vondrona antoko miisa 58 amin’ireo 210 mijoro ara-dalàna no nanolotra kandida. Tamin’ny Distrika miisa 106 amin'ny 119 no nandrotsahan’ny vovonana « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » kandida, raha toa ka 79 ny amin'ny anaran’ny Tiako i Madagasikara.
Andry Rajoelina: Hamonjy ny « One Planet Summit » ao Nairobi Kenya
Taorian’ny fitsidihana ara-panjakana sy niatrehany ny fetim-pirenena tatsy amin’ny Nosy Maorisy i Andry Rajoelina dia hiazo an’i Nairobi hamonjy ny « One Planet Summit », izay fihaonambe manerantany, andiany fahatelo, hikaroham-bahaolana mikasika ny fiovaovan’ny toetr’andro izy ity, ary sambany kosa i Kenya no mampiantrano izany.
Ampirisihina betsaka amin’izany ireo tetikasa maitso na « Projet vert » hiarovana ny tontolo iainana, ka misy ny fandresen-dahatra maro hanetsehana ireo mpamatsy vola ho amin’izany.